ဘလော့ဂ် မှတ်စု | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
မနက်ကလာတော့အသစ်မတွေ့ဘူး၊ အစ်မ မနော်ဟရီ ဆီ ရောက်တော့ ဆရာမကို tag ထားတာတွေ့လို့ ရေးပြီးပြီလား..လာချောင်းတာ..လာရကျိုးနပ်တာပေါ့..
မဇနိရဲ့ Blogging ပိုစ့်ကိုကောမန့်ရေးခဲ့သလိုပါပဲ..
စာမရေးတတ်ပေမယ့် စာမဖတ်ရမနေနိုင်တဲ့ ကျမတို့လို လူတွေအတွက် ဘလော့ဂ်ရွာကြီးဟာ ကလေး တစ်ယောက်ကို Happy World ထဲ လွှတ်လိုက် သလိုပါပဲ.."အမေ့ဒုတ်" နဲ့တူတဲ့ "အိမ်ထောင့်တာဝန်"တွေကြောင့် အချိန်တန်ရင် ပြန်ခဲ့ရပေမယ့် လစ်ရင်လစ်သလို ပြန်မလာရမနေနိုင်ပါ...
မမချိုသင်းရဲ့ ဘလော့ဂ်မှတ်စုလေးကို ဖတ်ရတာ ကြည်နူးတယ်။ ပိုက်ဆံနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ကြည်နူးမှုတွေကို ဘလော့ဂ်လေးက ပေးတာ ဟုတ်တယ်။ စိတ်ပင်ပန်းလှတဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘလော့ဂ်စာလေးတွေ ဘလော့ဂ်က ခင်မင်ရတဲ့သူတွေက အားဆေးတခုပါပဲ။ မမချိုသင်းပြောသလို လူလည်းမမြင်ဖူးဘူး မြင်ဖူးချင်တယ်လို့လည်း မဖြစ်မိဘူး
ဒါပေမယ့် ခင်တာတော့ ခင်နေတာပါပဲ။
ကိုယ့်စိတ်က ခင်မိနေတော့ သွားလည်မိတယ်။ ကိုယ့်ဆီလာလည်ရင်လည်း ကိုယ်သိတာလေးတွေနဲ့ ဧည့်ခံချင်တယ်။ အခွင့်ရှိသလောက်တော့ လည်နေအုံးမှာ အမရေ။
ရေးချင်တာရေးတဲ့ မြတ်နီုးတို့ထက် အမတို့ရေးတဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေက ဘလော့လောက ကို ပိုအသက်ဝင်ပါတယ်။
အမရဲ့ စာတွေဖတ်ပီး ပွင့်လင်းတဲ့အမကို စိတ်ထဲက တအားခင်တယ်။
စိတ်လွတ်လပ်ပြီးရေးချင်တာရေးလို့ရတော့ ဘလော့က ရေပန်းစားလာတာတယ်...
ကိုယ်ရေးတာကို အားပေးတာတွေ့ရင် ကြည့်နှုးမိပါတယ်... အဲဒါကြောင့်လည်း ရေးဖြစ်နေတာပေါ့...
အမတို့လို အရည်အသွေးပါကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာတွေ ရေးလာတော့ ဘလော့တွေက ဖတ်လို့ပိုကောင်းလာပါတယ်...
အမက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးတော့ ပိုပြီးလည်း ခင်မိပါသေးတယ်... ;)
အမတို့ လို နာမည်ကြီးတွေ ၀င်ရေးတဲ့အခါကျတော့ အမတို့ လက်ရာတွေကို နေ့ တိုင်းဖတ်ချင်နေမိရော။ စာအုပ်ဆိုင်မှာ အသစ်ရှိလားဟင်လို့ သွားသွားမေးရသလိုမျိုးပါဘဲ အမတို့ ဘလော့တွေကို နေ့ တိုင်း လာလာချောင်းရတာ။ ပိုကောင်းတာတခုကတော့ အရင်က မရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုး ဘယ်စာလေးကိုတော့ ဘယ်လိုကြိုက်တာ လို့ ပြောခွင့်ရတာပါ။ အကြည်ဓါတ်ကလေး မပျက်ဘဲ ပျော်ရွှင်စွာ စာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေ (တနေ့ တပုဒ်) ။ အပြုံးတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်။ ခေါင်း အကြာကြီး မစောင်းနဲ့ နော်း)း)း)း)း)း)း)း)း)း)း)း)း)း)
ပြုံးတာတောင် တည့်တည့်မပြုံးနိုင်ဘူးကိုး :)
တည့်တည့်ပဲရီရီ စောင်းစောင်းပီ ရီရီ အမရီနေရင် ကျနော်တို့ ငိုရသလိုပေါ့။ :) :)))
အင်း...ကျနော်လဲ ကလူသစ် လိုပဲ တွေးကြည့်နေတာ...
အမရေးတဲ့ မှတ်စုက ဘလော့ကောင်းတာတွေ ချည်းပါလား...
ဘလော့ရေးလို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်တာလေးတွေ လဲ ထည့်ရေးဦးလေ
ဥပမာ ။ ။ ဘလော့ရေးလွန်း အားကြီးလို့ အိမ်ကလူကြီး ငြိုငြင်တာ...း)
မမိုးချိုရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်အပေါ်သဘောထားလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ထပ်တူညီပဲ။ smile အချို့ ရေးပြမယ် သိလား။ :D အဲဒါ သွားဖြဲပြတာလေ။ :P လျှာထုတ်ပြတာ။ ;) မျက်စိမှိတ်မပြတာ။ ;)) ဒါက တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်တာ။ :)) ဒီဟာကတော့ အားရပါးရယ်တာလေ။ =)) ဒါကတော့ အားရပါးရ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လူးလှိမ့်ပြီးကို ရယ်တာ။ ဟီးးး :D
ကျွန်မ ဘလော့မှာ စာတွေ လာလာဖတ်ပြီး ကော်မန့်တွေ အမှတ်တရချန်ခဲ့တာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အရင်ပြောချင်ပါတယ်။
အစ်မ ဘလော့ကို လာလာဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ဘာမှမရေးခဲ့ဖူးဘူး။ အခုတော့ အစ်မတို့လို့ ဝါရင့်စာရေးဆရာတွေကနေ အတုယူစရာ ရေးပုံရေးနည်း တွေးပုံတွေးနည်းတွေ သင်ယူနိုင်အောင် ဘလော့ဂ်မှတ်စုတွေ လုပ်လာကြတဲ့အတွက် အထူးပဲ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အစ်မတို့ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့စာပေကို ဘလော့ဂ်ပေါ်က ထပ်ဆင့်ဖတ်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီလို မှတ်စုလေးတွေ အမြဲအဒွန့်ရှည်ပါစေလို့...
ချိုသင်း နဲ့မနော် ရေ
ပထမဆုံး ဖတ်ရတဲ့ ရည်းစားစာတို့ ၊ စွဲမိတဲ့ ကိုရီးယားရုပ်သံဇတ်လမ်းတွဲတို့ ၊ ချစ်မိတဲ့ အရပ်ရှည်ရှည် ကောင်ကလေးတို့ ၊ ပဒိုင်းသီးစားမိတဲ့ ညတည တို့ ၊ သင့်ဘလောဂ့်ထဲက အနှစ်သက်မိဆုံး ပွတ်ထားသော ကောမန့် တို့ .... မ တက် (Tag) တဲ့ ကျေးဇူးပါ။ KM
သားတော်မောင်စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့မို့သူနဲ့ လျှောက်ဆော့နေလိုက်တာနဲ့ ချိုသင်း ပို့စ်ကိုတွေ့တော့တော်တော်နောက်ကျသွားပြီ..ကွန်မင့်တွေ
ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သက်လို အစ်မရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ချစ်စရာ အမြင်လေးတွေကို လာဖတ်သွားပါတယ်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင် အကြာကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
ချိုသင်းရေ… နှလုံးသားထဲကအရှိအတိုင်း ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ရေးတတ်တာကိုက ချိုသင်းဘလော့ဂ်ရဲ့ အလှတရားပေါ့… အနုပညာပါဆင့်လိုက်တော့ အလှတွင်အယဉ်ဆင့်… ချိုသင်းဘလော့ဂ်လေးက နုနယ်ပျိုမျစ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးလို သိပ်လှတယ်…
အပြောကောင်းလို့နားထောင်သွားတယ်။ ဒီညတော့ သူ့ကြောင့် မရေးနိုင်တော့ဘူး။ စိတ်ဓါတ်ကျပြီးပြန်သွားလို့။ သူက အရမ်းကောင်းနေတာကိုး။
MCT ရှေ့မှာ ခက်ခက် ခဲခဲတွေ မပြောကြပါနဲ့ ကိုဇနိတို.ရယ် ခမျာ က ရိုးတယ် မေမိုးလို မဟုတ်ဘူး။
MCT က အလကား ကြားကောင်းအောင် ပြောသွားတာ။ သူ အဖြစ် မရှိဘူးတဲ့။ အစ် မကိုဝန်ခံပြီးသား။ လူအထင်ကြီးအောင် ပြောခဲ့တာတဲ့။ မရဘူးလေ။ မြွြေျေမွ ချင်း ခြေမြင် တာပေါ.။ အစ် မက ဒါမျှူိူးတွေ ပြောလာတာ အံတို နေပြီ။
ရှိပါသေးတယ် ပေါက်ရယ် ထမင်းဆုပ် ကလေးတွေ မှ အများကြီး။
ငါးရန်းခြောက် ဖုတ်စားချင်တယ်။ စားချင်တယ်။ စားချင် ပါတယ်ကွယ်။
စားချင်စရာ အာလူး ထမင်းနယ် ပါလား နိနိရေ။
လုပ်ရတာလဲ လွယ်တယ်နော်။ စမ်းလိုက်အုံးမယ်။
ဒါနဲ့ ဒီလိုလေးတွေ လုပ်တတ်၊ ချက်တတ်အောင် ဘယ်သူများ သင်ပေးပါလိမ့်၊ အမြဲတမ်း စားချင်စဖွယ် ဖြစ်နေလို့ပါ။ အိမ်ချင်းနီးရင် သိပ်ကောင်းမှာ။
ခစ် ခစ် ခစ်
ကိုဖုန်းမြင်.ကို အရှေ့ ကစာ တွေ ပြန် ဖတ်ခိုင်းရမယ်။ သူ စာ မကြေသေးဘုး သိလားညီမ
မမကေအိုအမ် လာမွှေသွားတယ်ဆိုလို့ လိုက်လာချောင်းတာ တကယ်ကိုပဲနော် သူရပ်ကွက်ထဲဆင်းပြီး ထင်တိုင်းကျဲနေတယ်
နိနိလည်း သေနပ်တလက်နဲ့ လိုက်ထိန်းနေရတာ
သူသုပ်သီးသုပ်ပျာလည်လို့ ခလုပ်မတိုက်အောင် လိုက်ထိန်းရသေးတယ် မမချိုသင်းရေ
ဖတ်ကောင်းလို့ လင့်ခ်လုပ်ပြီး စောင့်ဖတ်ပါရစေး)
လွတ်လပ်မှုအပြည့်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားမှုကို ပုံဖော်နိုင်တာ ဘလောဘ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အရသာပဲ။
မမ ရဲ့ အတွေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးပါအုံးနော်
ုစဉ်စာ မပါပဲဖတ်ရတော့ အရသာ ပိုရှိတာပေါ့
အစ်မရေ ... ဘလော့အပေါ်မှာထားတဲ့ သဘောထားက တော့ကွက်တိပဲ။ တူးလည်း အဲလိုပဲခံစားရတယ်။ စိစစ်ရေးကြီး မရှိတာနဲ့တင် လူဖြစ်ကျိုးနပ်လှချည်လား လို့ ခံစားရတယ်။
MCTး သာမီးလေး မေမိုး အဖေနဲ့ အမေ မွေးနေ.အတွက် ဆုတောင်းပေးဦး. ပြည်.ချင်လို့.
ရဲရဲကြီနိပ်လိုက်နော။ အာမခံတယ် ဘာမှ မဖြစ်စေရဘူး။
ချစ်စရာ မမခင်ဦးမေ တစ်ယောက်နဲ့တို့ ရပ်ကွက်ထဲ အတော် စည်ကားနေသဗျို့ ... ပျော်စရာ...။
မမရေ လာလည်တဲ့အတွက်ရော ဆုတောင်းအတွက်ပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ။မမစာတွေကို အမြဲအားပေးနေပါတယ် ။ :D
bring the cats :D
don't leave them alone! :)
it will be great traveling with cats.
ဒီနေ့မှ ရပ်ကွက် ထဲ လည်ဖြစ်တယ်။ အဟဲ..မနော်က..ဆက် ရေးခိုင်း လိုက်တယ်ပေါ့။ တကယ်တော့..နဂိုထဲက.. စက္ကူနဲ့ဘောပင် နဲ့ရေးခဲ့တဲ့..လူတွေကို.. ကြွက်နဲ့ ဘလော့မှာ ရေးတာ ဘယ်လိုကွာသလည်းဆိုတာ.. သိချင် နေခဲ့တာ။ မချိုသင်း တို့က..အဓိကပေါ့။ ဘာပဲပြောပြော..ဆိုခဲ့သလို..သိပ်ရှည်၂ ဝေး၂ မတွေးနိုင်ပါဘူးနော်။ ရေးချင်တာ..ရေးပစ်မှာပဲ။
ပထမဆုံး ၀တ္တုလေး..ပြန်တူးဖော်ဖြစ်တာလည်း..အမှတ်တရပါပဲ။ တခြားရေးဖြစ်တဲ့ ၀တ္တုတွေလည်း..ဖြည်းဖြည်းချင်း တင်ပါအုံး..မမေငြိမ်းလိုလေ။
း) ( တစောင်းလေး ပြုံးလိုက်တယ်)
ဒီဘလောဂ့်လေးကို စပြီးသိကတည်းက နေ့တိုင်း (စနေ၊ တနင်္ဂနွေကလွဲလို့) မပျက်မကွက် ၀င်ဖြစ်ပါတယ်.. အသစ်တင်ထားတာမတွေ့ရင်.. စိတ်မကောင်းဘူး.. နေမကောင်းလို့စာမရေးတာလားလို့ တွေးမိတယ်.. မမိုးချိုရဲ့ ဒုတိယမြောက်ပိုစ့်ကလေးရေးတဲ့ နေ့ကနေပြီး အခုထိပေါ့..
ဒါကြောင့်.. တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်.. စာရှည်ရှည်မရေးနိုင်တောင်မှ.. အတိုလေးတွေတော့ တင်စေချင်ပါတယ်.. ကျမက ဒေါ် (မ) စန်ဒါ အသဲစွဲလေ.. အခု ဒီမှာ က ကိုယ်ဖတ်ချင်တာ ဖတ်ခွင့်မရှိတော့.. ဘလောဂ့် ဂါတွေထဲက ကိုယ်အရေးအသားကြိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ စာလေးတွေဘဲ စောင့်ဖတ်ရတယ်.. မမိုးချိုရဲ့ စာတွေ ဖတ်ရတာ.. စိတ်ချမ်းသာတယ်.. အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ဆင်းရဲသမျှ ..မမိုးချိုရဲ့ စာလေးတွေ ဖတ်ပြီး ပြုံးရ၊ ရီရရင် စိတ်သက်သာတယ်...အထူးသဖြင့် ကြောင်လေးတွေ အကြောင်း သိချင်ပါတယ်.. မမိုးချို ခွေးလေးတွေရော.. မတွေ့မိဘူးလား. ဟင်.. နေကောင်းအောင်နေပါ.. ဒါမှ စာများများရေးနိုင်မှာပေါ့နော်.. ဒီမှတ်စုလေးတွေက သိမ်းထားဖို့ သက်သက်ဘဲလား... ပြန်ပြောဖို့ရော.. အစီအစဉ်ရှိလား..
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ နိနိနဲ့ ကျနော် စုံတွဲလာကန်တော့တာ...
မမိုးချိုသင်းရေ.. သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မို့ လာကန်တော့ပါတယ်.. နိနိတို့စုံတွဲလို မုန့်တော့ မပါဘူး.. လက်ချည်းပဲ အမ.. အဟီး.. :D
ချိုသင်းရေ… အဖော်လာခေါ်တာ… ရေကျော်ဘက်မှာ စတိတ်ရှိုးသွားကြည့်ရအောင်လို့ …
စေတီက တိုပိုင်းရိုး မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တည်ထားတာပါ။ နေဝင်ချိန်ကို ရိုက်ထားတာဆိုတော့ မီးမထွန်းရသေးပါဘူး။ အဲဒီနေ့က တရားပွဲသွားရင်း ရိုက်လာတာ လပြည့်နေ့မဟုတ်သေးဘူး။း)